GF (J) andian-tsakafo tsy misy fangarony miaraka amin'ny vata fampangatsiahana-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Ny vata fampangatsiahana takelaka novokarin'ny Square Technology dia afaka mangatsiaka haingana ny karazana vokatra maro, toy ny trondro sy makamba, akorandriaka, legioma, hena mizara, akoho amam-borona ary sakafo mangatsiaka fonosana kely. Ny takelaka dia apetraka mitsivalana toy ny talantalana raha raikitra ny elanelana sosona. Ny vokatra dia hapetraka eo amin'ny takelaka ho an'ny hatsiaka. Tsy mitovy amin'ny vata fampangatsiahana fenitra mahazatra, ny habeny lehibe kokoa dia azo natao ho an'ny fahafaham-baraka avo kokoa. Ny vata fampangatsiahana takelaka toy izany dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana compressor.
◆ Izy io dia fitambaran'ny famafazana fipoahana sy ny vata fampangatsiahana. Ny vokatra dia mifandraika amin'ny takelaka alimina vita amin'ny vata fampangatsiahana amin'ny faran'ny ambany, raha mitsoka ny rivotra mangatsiaka ny mpankafy amin'ny tampon'ny sy ny sisin'ny vokatra.
◆Ny takelaka dia vita amin'ny alimina marin-dranomasina. Ny vata fampangatsiahana dia mamakivaky ireo fantsona marobe ao anaty lovia aluminium. Ny takelaka dia maivana, matanjaka, tsy harafesina ary tsara amin'ny fitarihana hafanana.
◆Ny endriny dia vy milentika mandroboka mafana, mahazaka harafesina be.
◆Ny valindrihana dia voaravaka sombin-javatra polyurethane iray miolakolaka mba hiantohana ny rafitra matanjaka sy hampihena ny fahaverezan'ny hatsiaka amin'ny fanesorana ireo tonon-taolana.
◆Ny vata fampangatsiahana dia miaraka amin'ny fitaovana compresseur maro an'ny Bitzer alemana. Izy io dia tena mahomby. Ny rafitry ny fampangatsiahana dia mety manana compresseur iray, roa na telo mihazakazaka iray miankina amin'ny enta-mavesatra tena izy.
● Fangatahana mangatsiaka:> 3000kg / batch (Miorina amin'ny: 15Kg / sakana, refin'ny sakana: 600mm × 400mm × 80mm)
●Takelaka takelaka: sosona mangatsiaka 10: 10
●Faritra mangatsiaka takelaka: 5500mm × 1200mm
●Fanesorana takelaka: 144mm; Fahazoan-dàlana: 110mm
●Entana fampangatsiahana: 105kw (+ 35 ℃ / -35 ℃) (Miaraka amin'ny rivotra mangatsiaka)
●Temp infeed.:+20℃ Temps outfeed.:-18℃
●Hafainganan'ny rivotra eo anelanelan'ny takelaka: 2m / s
●Lafiny ankapobeny: 8520mm (L) × 2115mm (W) × 2360mm (H)
● Mety tsara amin'ny trondro mangatsiaka, makamba, sakafo atoandro, akoho amam-borona ary ny hafa fonosana kely .
Vokatra mora / voatahiry